Chigadzirwa Assembly - Chapman Technology Co., Ltd.
Mukuita kwekugadzirwa kwechigadzirwa, chikamu chegungano ndechimwe chemadhipatimendi edu akakosha. Kubva pakuyedzwa kwechigadzirwa, gungano rezvigadzirwa, kutengeswa kwechigadzirwa, aya mamiriro ekushanda, gungano rinoratidzika kunge rakakosha kwazvo.
Isu takakamurwa kuita maviri magungano mashopu emagetsi nemagetsi zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvekurapa. Mune dhipatimendi remagetsi emagetsi nemagetsi, isu tine masystem ekuchengetedza emoto uye kudzivirira moto. Mubazi rezvechigadzirwa chechigadzirwa, Tine hurongwa hwekumisikidza mweya kutenderera system muna 2021 kuona kuti gungano remusangano gungano rinosangana neiyo ISO: 13485 yemhando yepamusoro system.
Kune mazhinji makambani, ruoko-gungano rinotora nguva uye rinodhura. Isu tinopa mhinduro dzakagadziriswa kubva pakuunganidzwa kwakareruka kune yakaoma kuvaka uye gungano. Isu tichaendesa nekukurumidza makotesheni, nekukurumidza kutendeuka, kusanduka kuronga uye nemhedzisiro mhedzisiro.
Chapman Muitiyakakumikidzwa mukugadzira mhinduro dzakawanda dzinowedzera mikana yebhizinesi rako. Nekatsika chigadzirwa kurongedza, chigadzirwa chigadzirwa, uye chigadzirwa kitting, hazvina kumbobvira zvakave nyore kuunza rako bhizinesi zviroto kuhupenyu. Chikwata chedu chinonzwira tsitsi chakazvipira kugadzira zvigadzirwa zvekutanga zvinomiririra zvinangwa zvebhizinesi, kugadzirisa kugadzirwa, uye kurerutsa mashandiro. Uye nezvivakwa muDongguan, tinogona kuunza zvigadzirwa zvedu zvekugadzira kune vateereri vakawanda, tichipa rutsigiro rwehunyanzvi runogona kuchinja kumeso kwebhizinesi rako.
Chapman Muitichigadzirwa chechigadzirwa uye kurongedza zvinosimudzira zvinotarisirwa nemakambani echitatu-bato yekuzadzisa, kuwedzera nyika yebhizinesi sekuiziva kwedu. Uchishandisa musanganiswa wakasarudzika wemaoko ehunyanzvi, hunyanzvi hwekubuda, uye nharaunda dzakasarudzika, zvigadzirwa zvako zvichaunganidzwa uye zvakasunganidzwa nemazvo uye nemazvo. Uye neakasika dhizaini vashandi, yakasarudzika yekupa sarudzo, uye kunyatsoteerera-kune-ruzivo, yako hesera ichatorwa uye yakarongedzwa neisina kufananidzwa kusanzwisisika uye kukurumidza.